အဖဘုရားရှင်ဟာ သူ့ရဲ့မည်သည့် သားသမီးကို မှ စွန့်ပစ်တော်မူမည် မဟုတ်ပါ ဟု ကက်သလစ်LGBT (လိင်တူစုံမက်သူများ) သို့ ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား | Radio Veritas Asia
အဖဘုရားရှင်ဟာ သူ့ရဲ့မည်သည့် သားသမီးကို မှ စွန့်ပစ်တော်မူမည် မဟုတ်ပါ ဟု ကက်သလစ်LGBT (လိင်တူစုံမက်သူများ) သို့ ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
LGBT အသိုင်းအဝိုင်းကို တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ရသည့် သိုးထိန်းတော် ဂျေဇဝစ် (Jesuit) ရဟန်း Fr.James Martin က ပါပါးဖရန်စစ်ကို ဖြေကြားပေးရန် လျှောက်ထားခဲ့တဲ့ မေးခွန်း ၃ ခုကို ပါပါးက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားရှင်ဟာ လျှို့ဝှက်နက်နဲပြီး ကြင်နာသနားတတ်ခါ ငြင်သာပျော့ပြောင်းကြောင်းဖြင့် ပါပါးက မေးခွန်း ၃ခု အပေါ် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ကက်သလစ် LGBT အသိုင်းအဝိုင်း နှင့် သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းအချို့ကို ဖြေကြားပေးပါရန် Fr.Martin က ပါပါးထံသို့ စပိန်ဘာသာစကားနှင့် စာရေးသားပေးပို့ပြီး မေလ ၅ ရက်နေ့က မေးမြန်းခဲ့တာပါ။
Fr.Martin ​၏ " Outreach" အမည်ရှိ website မှာ လူတွေ့အင်တာဗျူး ပုံစံအစီစဉ်တခု တင်ဆက် ပြီးနောက် ၂ရက်အကြာတွင် သူဟာ တုန့်ပြန်မှုစာတစောင်ကို လက်ရေးမူနဲ့လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း၊
ပါပါးရေးသားထားတာက "သင့်ရဲ့ မေးခွန်းများကို လေးစားစွာဖြင့် ရိုးရှင်းစွာ ကျွန်ုပ် ပြန်လည် တုန့်ပြန် ဖြေကြားလိုစိတ်ပေါ်လာပါတယ်"
Outreach: ဘုရားရှင်ကိုသိရှိရန် မည်သည့်အရာသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်း LGBT များကို သင်ပြောပြလိုပါသလဲ ?
ပါပါး Franscis: အဖဘုရားရှင်ဟာ အဘဖြစ်တော်မူပြီး မည်သည့်သားသမီးကိုမှ မစွန်ပစ်ပါ ၊ ကြင်နာ သနားတော်မူ၍ လျှို့ဝှက်နက်နဲခါ သိမ်မွေ့နူးညံ့တော်မူပါတယ်၊ ဤကဲ့သို့ သောနည်းလမ်းအားဖြင့် ဘုရားရှင်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
Outreach: အသင်းတော်နဲ့ပါတ်သက်လို့ LGBT များကို မည်သည့်အရာကို သိရှိစေလိုပါသလဲ?
ပါပါးဖရန်စစ်: တမန်တော်ကြီးများရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းအချုပ် စာအုပ်ကို သူတို့တွေ ဖတ်ကြည့် စေချင် ပါ တယ်၊ ရှင်သန်နေသည့် ကက်သလစ်အသင်းတော်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို အဲ့ဒီထဲမှာ သူ တို့တွေ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Outreach: အသင်းတော်ရဲ့ ပစ်ပါယ်ခြင်းကို တွေ့ကြုံခံစားရဖူးတဲ့ လိင်တူစုံမက်သူ (LGBT) တယောက် ကို သင်ဘာပြောလိုပါသလဲ ?
ပါပါးဖရန်စစ်: ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ကတော့ သူတို့တွေကို အပစ်ပါယ်ခံအဖြစ် ယူဆမည့်အစား အသင်း တော် အတွင်းမှ လူသားများပင်ဖြစ်သည်ဟု အသိမှတ်ပြုပါတယ်၊ အသင်းတော်ကြီးဟာ မိခင်သဖွယ်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ သားသမီးအားလုံးကို အတူတကွ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်၊ စားပွဲတော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံကြရသူများ ပုံဥပမာကို နမူနာယူစေချင်တာပါ။ ဆင်းရဲသူ၊ ချမ်းသာသူ၊ အပြစ်သား နဲ့ တရားမျှတသူ အားလုံး ပါဝင်ပါတယ်
( ရှင်မသဲ၂၂:၁-၁၅ နှင့် ရှင်လုကာ ၁၄:၁၅-၂၄) ၊ သီးသန့်ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် ထားတဲ့ အသင်း တော်ဟာ သန့်ရှင်းမွန်မြတ်တဲ့ အမိအသင်းတော် မဟုတ်နိုင်
၂၀၂၁ဇူလိုင်လတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး​၏ မြွက်ကြားချက်
(outreach 2021) ​၏ ဝက်ဘီနာ(webinar)တခု ၌ ပါပါးဖရန်စစ်မှ ဖာသာရ် မာတင်ထံသို့ ပေးပို့တဲ့စာမှာ " ဘုရားရှင်ဟာ တဦးတယောက်တိုင်းစီနဲ့ နီးကပ်စွာတည်နေတော်မူပြီး သူ​၏သားသမီးအားလုံးကို ချစ်မြတ်နိုးတော်မူပါတယ်။ အဖဘုရားရှင်ဟာ အဖဖြစ်တော်မူသည်နှင့်အညီ သူ​၏နှလုံးသားကို အားလုံးအတွက် ဖွင့်ဟ ထားပါတယ်၊ "သင့်ရဲ့ သိုးထိန်းလုပ်ငန်းကို ကျွန်ုပ်တွေးတောမိရာမှာ သင်ဟာ ဤဘုရားရှင်ရဲ့ပုံစံတော်ကို အစဉ်အမြဲ ကြိုးစား အတုယူခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်၊ သင်ဟာ လူတိုင်းအတွက် ရဟန်းတပါးပါ၊ သင့်အတွက်လည်း ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ဆုတောင်းပေးပါ့မယ်" ပါပါးရဲ့ အဆုံးသတ်စကားကတော့ " သင့်ရဲ့ ယုံကြည်သူ ဘာသာဝင်တို့အတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးပါ့မယ်၊ ထိုသူတို့အားလုံးကို သင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဘို့ သူတို့တွေဟာ ယေဇူး ခရစ်တော်ရှင်​၏ ချစ်ခြင်း၌ ရှင်သန်တိုးပွားအသက်ရှင်နိုင်ရန် သင့်ရဲ့နဘေးမှာ ဘုရား ရှင်က သင့်ကို ချထားပေးတဲ့ ထိုလူများ အား လုံးအတွက် လည်းဆုတောင်းပေးပါ့မယ်" လို့ ဖြေကြားရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။